Wararka - e -LinkCare ayaa ka qeybgalay Shirweynaha Caalamiga ah ee ERS 2017 ee Milan
e-LinkCare wuxuu ka qeyb galay Shirweynaha Caalamiga ah ee ERS 2017 ee Milan
ERS sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Ururka Neefsashada Yurub waxay ku qabatay Shirweynaheedii caalamiga ahaa ee 2017 magaalada Milan, Italy bishan Sebtember.
ERS waxaa loo aqoonsaday mid ka mid ah kulanka ugu weyn ee neefsashada adduunka maadaama ay muddo dheer ahayd xarun cilmiyeed muhiim u ah Yurub. ERS ee sannadkan, waxaa jiray mowduucyo kulul oo badan oo laga dooday sida daryeelka degdegga ah ee neefsashada iyo cudurrada hawo -mareenka.
e-LinkCare waxay ku raaxaysatay si wadajir ah iyada oo in ka badan 150 ka-qaybgale ay ka soo qaybgaleen dhacdadan laga bilaabo 10-kii Sebtembar waxayna muujiyeen farsamooyinkii ugu dambeeyay e-LinkCare iyaga oo soo bandhigay alaabooyinka daryeelka neefsashada ee UBREATH TM si guul lehna u soo jiitay dareenka booqdayaal badan.
UBREATH TM Spirometer Systems (PF280) & (PF680) iyo UBREATH TM Mesh Nebulizer (NS280) waxay ahaayeen badeecooyin cusub oo dunida lagu soo bandhigay markii ugu horreysay, labadooduba waxay heleen jawaab celin weyn intii lagu jiray fadhigii bandhigga, dad badan oo soo booqday waxay muujiyeen danahooda iyo is -weydaarsadeen xiriirro fursado ganacsi oo suuragal ah.
Guud ahaan, waxay u ahayd dhacdo guul leh e-LinkCare oo u heellanaa inay noqoto shirkadda hormuudka ka ah warshadan. Waxaan rajeynayaa inaan ku arko 2018 shirweynaha caalamiga ah ee ERS ee Paris.
Waqtiga dhejinta: Mar-23-2021
Xiriirinta daryeelka nolosha wanaagsan.
5F No.1418-48 Wadada Moganshan, Degmada Gongshu, Hangzhou, China 310000
Cutubka 46 Cariocca Park Park 2 Sawley Road, Miles Platting, Manchester United Kingdom M40 8BB
Qalabka Baaritaanka Sonkorta Dhiigga ee Bilaashka ah, Pneumotachograph Spirometer, Mashiinka Hubinta Sonkorta Shirkadda ugu Fiican, Mashiinka Baaritaanka Sonkorta Dhiigga, 5.2 Sonkorta Dhiigga, Soonka Sonkorta Dhiigga 100,